Daawo: Booliska oo shaaciyay lacagta ku jirtay akoonada Atooraha Badda | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada News Daawo: Booliska oo shaaciyay lacagta ku jirtay akoonada Atooraha Badda
Daawo: Booliska oo shaaciyay lacagta ku jirtay akoonada Atooraha Badda
Tuesday, May 03, 2022 Bulshada , News
Bulsha:- Afhayeenka ciidamada Booliska Soomaaliyeed oo maanta shir jaraa’id qabtay ayaa soo bandhigay tirada lacagta ku jirtay Akoonada Sarkaalkii ka tirsanaa ee Cismaan Salaad Daahir oo ku magac dheeraa “Atooraha Badda Liido”.
Afhayeenka ayaa sheegay in labo Akoon oo ay baaris ku sameeyen ay ku ogaadeen in midkood ay ku jirto lacag dhan 50kun oo dollar (50,000), halka mid kale ay ku jirtay lacag gaareyso 3,300 dollar.
Akoonka koowaad oo ah midka ay ku jirto lacagta 50kun dollar ayaa waxaa furay ninka dilka geystay oo uu hore Afhayeenka Booliska u sheegay in uu Atooraha Badda isku qabsadeen lacagtaas, taasi oo markii dambe sababtay in uu murankaas ku baxo Atooraha, oo ahaa saaxiibkii.
“Waxaa weli aan la baarin akoonada eDahab-ta iyo shirkada Taaj, inta uu Booliska Soomaaliyeed gacanta ku hayo telefoonada lacag ayaa kusoo dhaceysa, 150 dollar shalay ayay soo dhacday,” ayuu yiri Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed.
“Waxaa u xaqiijinaya bulshada Soomaaliyeed inay ku kalsoonadaan ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo aqoontana waa leenahay. Haddii aan dhaqaale ahaan ka liidano dalalka caalamka, aqoon ahaan waa la simanahay oo maalin baa gaadhi doona meel walba kaamirooyin ku xiran tahay oo wax walba la cadeyn doono.”
Sidoo kale wiil la dhashay Atooraha Badda AUN ayaa asaguna goobta ka cadeeyay inay ku qanceen, lana tusay akoonada lacagaha ay ku jiraan, maadama markii hore ay shaki badan ka qabeen in Atooraha Badda uu ku baxay muran lacageed.
“Xooga is-faham la’aan aniga iyo afhayeenka Booliska na dhex-martay ayaa kadib waxaa tagnay xarunta Booliska, waxay ituseen akoomada uu wiilka lahaa lacago ku jiray iyo lacago kale oo dad boosas ugu gadayo oo kamaamka oo dadka meesha ugu tala-galay inuu wax ka siiyo.”
Afhayeenka Booliska ayaa hore u shaaciyay maalmo ka hor in Atooraha Badda iyo Saaxiibkiis Leeleefow uu soo kala dhex-galay muran lacageed oo gaaraya 60kun, kaasi oo markii dambe uu ku baxay AUN Atooraha Badda Liido.